Fitrandrahana ao Didy – Teratany srilankey iray nentina aty Antananarivo niaraka tamin’ny vato - AO RAHA Gazety Malagasy Online	Ny gazety Ao RahaTahiry
Fitrandrahana ao Didy – Teratany srilankey iray nentina aty Antananarivo niaraka tamin’ny vato
Voalaza fa efa voarara ny fitrandrahana safira ao Didy anefa mbola misy izao raharaha fanenjehana mpividy vato izao indray
Naharitra ora telo ny fisavana ny trano nisy ity teratany srilankey iray tao an-tampon-tanànan’Ambatondrazaka, ny faran’ny herinandro teo. Nentina niakatra aty Antananarivo izy taorian’izay hatao fanadihadiana.
Mifamahofaho be ihany ny antony nisam-borana azy io. Raha ny vaovao azo avy any an-toerana mantsy dia mpividy vato ao Didy izy.
Haka ny anjarany
« Misy ny mpanelanelana azy amin’ireo mpitrandraka vato.
Nahare io mpane­lane­lana io fa nahalafo safira mitentina Ar 30 000 tapitrisa izy. Haka ny anjarany tamin’ilay tera­tany srilankey izy raha ny fantatra, saingy nilaza ity farany fa tsy nahalafo vato Ar 30 000 tapitrisa izany. Nakan’io mpanelanelana io mpitandro ny filaminana ilay teratany srilankey ka tratran’ny fisavan-trano», raha ny fanazavana azo avy any an-toerana.
Nanamafy ny teo anivon’ny vondron-tobim-pileovan’ny Zandarimariam-pirenena ao Alaotra-Mangoro fa nisy tokoa ny fisavana ny trano nisy ity srilankey ity, ny sabotsy teo. « Kolonely avy eo anivon’ny minisiteran’ny Ala sy ny Tontolo iaina­na ary zandary hafa avy amin’ny borigadin’i Tanà-ville no nanao ny fisavana, araka ny taratasy avy amin’ny Fitsarana ao Antananarivo. Fanen­jehana manoloana ny fanimbana ny ala aro­vana ao Ankeniheny Zahamena no fototr’io taratasy io. Nentin’izy ireo niakatra any An­tananarivo ilay teratany srilankey avy eo », hoy ny manamboninahitra iray.
Nandà ny filazana fitakiam-bola amin’ilay teratany srilankey ny avy ao amin’ny minisiteran’ ny Tontolo iainana. « Hetsika ao anatin’ny fiarovana ny ala no nataon’ireo mpitandro ny filaminana ireo tany an-toerana. Vato sy fitaovana fandanjana vato no nogiazana tamin’io tera­tany srilankey io. Nentina aty Antanana­rivo hohadihadiana izy, saingy mbola naiditra hopitaly eny amin’ny Homi satria narary. Rehefa mivoaka eny izy no ho alaina am-bavany », hoy ny teo anivon’ity minisitera ity.
Mpanoratra Rijakely, 08.11.2012, 09:34	FIARAHAMONINA